ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်: မိမိနဲ့ ငါ ခဏခဏရန်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဦးကြီး ...
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Thursday, December 27, 2007
That is one of my favourite Haymar Nay Win's songs.
အကိုရေ။ အကို့ဦးကြီးကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရည်းစားစကားပြောဖို့ပဲ ကြံစည်တာပေါ့။ ငါနဲ့ မိမိ ရန်မဖြစ်ချင်တော့ဘူး။
ဘဘအတွက် အမှတ်တရ ရေးထားတဲ့ ပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီး ဆုဝေ ဖေဖေ့ကို သတိရမိတယ်…။ ငယ်ငယ်ကဆို ဖေဖေနဲ့မြို့ထဲလိုက်တိုင်း ဘဘနဲ့ ခဏခဏ ဆုံဖြစ်တယ်။ သဘောကောင်းတဲ့ ဘဘက တွေ့လိုက်တိုင်း ၀မ်းသာအားရ အပြုံးနဲ့ နှုတ်ဆက်တတ်တာ မျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်နေတုန်းပါပဲ။ ဖေဖေနဲ့ ဘဘက တကယ့်ကို ၀ါသနာတူတွေပါ။ သီချင်းလေးတွေကို လက်ရေးနဲ့ ကူးတတ်တာကအစ ကဗျာစာအုပ်ထုတ်ဖို့ ၀ါသနာကြီးတာ အဆုံးပေါ့…။ ခုဆို ဘဘဆုံးတာ ၇ နှစ် ပြည့်သွားသလို ဖေဖေဆုံးတာလဲ ၄ နှစ်ကျော်သွားပါပြီ။ အကိုဆုတောင်းသလို ကောင်းရာသုဂတိမှာ ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ပြီး ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုဝေလဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ဦးကြီးကဗျာလေးခိုက်တယ်ကွ ဦးကြီးကာင်းရာသုဂတိမှာ ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ပြီး ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလေ
တသက်လုံး မလုပ်ချင်တာတွေ သိမ်းကြုံး လုပ်ရင်း လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့တာတွေထက် ဘ၀ရဲ့ နောက်ဆုံး အချိန်လေးမှာ လုပ်ချင်တာလေး လုပ်လိုက်ရလို့ ဖြစ်လာတဲ့ ပီတိက မနှိုင်းယှဉ် သာအောင် ပို ခံစားလို့ ကောင်းတယ် မလဲနိုင်ဘူး။ ကွေးသောလက် မဆန့်မီ ဆန့်သောလက် မကွေးမီတဲ့.. ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်က သူတပါးကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မထိခိုက်လို့ ကတော့ ချသာချ.. နို့မို့ရင် နောက်ဆုံး ထွက်သက်မှာ ၀မ်းနည်း နေရရင် ဘ၀ကူး ကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး
ဒါပေမယ့် အနုပညာသမား စစ်စစ် ဆိုတာ ပေးဆပ်ဖို့ အတွက် လူဖြစ်လာတာမို့ ကိုယ့်ဖန်တီးမှု တိုင်းဟာ လောက ကောင်းကျိုးဆိုတဲ့ စိတ်စေတနာ ကတော့ ကောင်းရာမွန်ရာကို ရောက်စေမှာ အသေအချာပါ
I knew his poem when I high school student . I sorry for him bro ,he's is my favourite artist but I can't understand why can't I find his poem & now I knew.So sorry for u lost & his position.
Ah myan sone loot myawt par say....
Get the dinner with your lovely family as soon as possible....